नेकपाका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्दै, के आउला निर्णय ? – Saurahaonline.com
नेकपाका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्दै, के आउला निर्णय ?
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। मंगलबार दिउँसो ४ बजे बहुमत सचिवालय सदस्यहरुको अनौपचारिक बैठक बस्ने तय भएको हो। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ फेरि छलफलमा बस्न लागेका हुन्।
पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउने विषयमा छलफल गर्न अनौपचारिक बैठकमा बस्न लागेको बताइएको छ। शनिबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउन अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लिखित आग्रह गरेका थिए। बहुमत सदस्यले दुईदिनभित्र सचिवालय बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेका थिए। तर उक्त भेटमा ओलीले कुनै निष्कर्ष दिएनन्।
बैठक बोलाउन बहुमत सदस्यले दिएको ४८ घण्टे अल्टिमेटम भने सोमबार सकिएको छ। सोमबार सचिवालय सदस्यले दिएको पत्रमा तोक लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले पनि महासचिव विष्णु पौडेललाई दूतको रूपमा खुमलटार पठाएका थिए। महासचिव पौडेलमार्फत ओलीले पार्टी बैठक १५ दिनपछि मात्रै बस्न सक्ने संकेत गरेका थिए। तर, प्रचण्डले मंगलबार सम्म बैठक नबोलाए प्रक्रियागत हिसाबले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने नेकपाका एक नेताको भनाई छ।
ती नेताका अनुसार सचिवालयका बहुमत सदस्यले ओलीले बैठक नबोलाए औपचारिक बैठकको तयारी गरेको छन्। यता ओली तत्काल बैठक राख्न तयार नरहेको स्रोतको भनाई छ। तर, ओलीले आकर्षित नै नहुने विधानको धारा टेकेर बैठक अझै टार्न-पन्छाउन खोजेको उनी बताउँछन्। विधानको धारा ५९ (४)मा कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक पन्ध्र दिनभित्र बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ। यही धारामा टेकेर वैशाख १० गते स्थायी कमिटीका २० जना र साउनमा १४ गते केन्द्रीय कमिटीका १५२ जना सदस्यहरूले तत्काल तत्तत् कमिटीको बैठक डाक्न माग गरेका थिए।